Ady amin’ny tazomoka: nahazo vola mitentina 24 tapitrisa dolara | NewsMada
Ady amin’ny tazomoka: nahazo vola mitentina 24 tapitrisa dolara
Nahazo vola mitentina 24 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy ampiasaina ho an’ny ady amin’ny tazomoka avy amin’ny Tahiry iraisam-pirenena momba ny ady amin’ny Sida, ny raboka ary ny tazo. Hoentina manatanteraka ny politikam-panjakana momba ny fahasalamana (ady amin’ny aretina tazo) ny tohana, manampy ny sorabola efa nokirakiraina nanomboka ny taona 2017-2019. Hividianana lay misy fanafody ny fanampiana azo ary hotsinjaraina amin’ny faritra tena mila azy. Haharitra hatramin’ny volana jona 2021 ny fampiasana ny sorabola. Nohavaozina ny paikady nasionaly hiadiana amin’ity aretina ity ho amin’ny taona 2018-2022. Araka izany, raha nifantoka kokoa tamin’ireo faritra tena hitrangan’ny tazomoka ny ady hatrizay, ny distrika teo amin’ny faritra anivon-tany no tena nohamafisana.
Mbola mamely koa ny aretina tazomoka ho an’ny faritra Atsimo Andrefana sy Atsimo Atsinanana noho ny toetry ny andro sy ny toe-tany any. Efa maromaro ny toerana antsoina ho “stade de pré-élimination” izany hoe efa ho foana ny tazomoka ao aminy, singanina manokana amin’izany Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano.
Ho an’ ny faritra Analamanga, nisy ny fanomezana fanafody miaro amin’ny tazomoka ho an’ny vehivavy bevohoka, famendrahana ranom-panafody mamono moka isan-tokantrano ary ny fitiliana sy fitsaboana ny tazomoka eny amin’ny tobim-pahasalamana. Ankoatra ireo, hisitraka fizarana lay misy odimoka maharitra ny vahoaka.